I-Ultrasonic Wet-Milling ne-Micro-Grinding - Hielscher Ultrasound Technology
I-ultrasonication iyindlela ephumelelayo yokugaya amanzi kanye nokwehlukanisa okuncane kwezinhlayiyana. Ngaphandle kwalokho ukusabalalisa nokusabalalisa, ukukhishwa okumanzi kuyisicelo esibalulekile samadivayisi we-Hielscher ultrasonic.
Ikakhulukazi ekukhiqizeni ama-slurries esayizi-superfine, ama-ultrasound anezinzuzo eziningi, uma kuqhathaniswa nemishini evamile yokunciphisa usayizi, njengama-mill colloid (isib. Izigayili zebhola, izikhwama ze-bead), ama-disc, ama-jet mills, i-rotor-stator mixers (ultra i-turrax) noma ama-homogenizers aphakeme kakhulu. I-ultrasonication ivumela ukucubungulwa kwe-high-concentration kanye ne-high-viscosity slurries - ngaleyo ndlela ukunciphisa ivolumu okufanele icutshungulwe. Ukukhishwa kwe-ultrasonic kufanelwe ngokukhethekile ukucubungula ubungako be-micron kanye ubukhulu be-nano izinto ezifana ne-ceramics, i-alumina trihydrate, i-barium sulphate, i-calcium carbonate ne-oxides ensimbi. Amatafula angezansi abonisa izithombe ezincane ze-milling of i-alumina trihydrate (kusuka ku-150 micron kuya ku-10 micron), i-ceramics (kusuka ku-30 ​​micron kuya ku-2 micron) futhi i-carbonate ye-sodium (kusuka ku-micron engu-70 kuya ku-3 micron).
I-Microscope ithuthukisa izithombe ze-ultrasonic milling ye-Hydrated Alumina
Chofoza ezithombeni ezingenhla ukuze ubone izithombe eziphelele zokuxazulula (640x480px).
I-Alumina Trihydrate esetshenzisiwe yanikezwa ngu Alcoa World Alumina LLC, Pittsburgh, PA, USA. I-Alumina Trihydrate AL (OH)3 ubizwa nangokuthi i-Aluminium Trihydroxide ATH Series, i-Bayer Hydrated Alumina, i-C-30, i-KB-30, i-KC-30, i-KH-30, i- Hydragyllite noma i- Gibbsite. Inayo I-Mohs’ ubunzima of 2.5 kuya 3.5.
I-microscope ithuthukisa izithombe ze-milling ultrasonic i-Dental Ceramic
I-microscope ithuthukisa izithombe zokugaya ultrasonic ye-Sodium Carbonate (i-Na2CO3) e-Isopropanol
Chofoza ezithombeni ezingenhla ukuze ubone izithombe eziphelele zokuxazulula (1280x1024px). I-Sodium Carbonate Na2I-CO3 Uyaziwa nangokuthi ukugeza i-soda noma i-soda ash.
I-Microscope ithuthuka izithombe ze-milling ultrasonic yama-magenta pigment yamafutha
Chofoza ezithombeni ezingenhla ukuze ubone izithombe eziphelele zokuxazulula (1280x1024px).
Amadivayisi we-Ultrasonic kulula kakhulu ukufaka nokusebenza. Kunezingxenye ezimbili kuphela oxhumana nazo izinto okumele zilandelwe: i-sonotrode ye-titanium nensimbi yegeyinti yokugeleza kwensimbi. Ngenxa yomklamo olula we-flow ultrasonic cell, amayunithi angahlanzwa masinyane. Njengoba amadivaysi e-ultrasonic e-Hielscher enomsebenzi ophezulu kakhulu ekuguqulweni kwamandla kagesi abe ngamandla kagesi ngokuvamile amandla amancane angadingeka ukuze kukhishwe umshini we-ultrasonic kunomshini wokugaya ovamile.
Umthelela we-particle milling usekelwe ngokuqinile cavitation ultrasonic. Lapho ukuphuza utshwala ngokweqile, amagagasi omsindo asakaze emithonjeni yamanzi ashukumisela ukushintsha ukucindezela okuphezulu (ukucindezela) nokujikeleza okuncane (ukungavamile), namazinga kuye ngokuthi imvamisa. Ngesikhathi umjikelezo ophansi ocindezelayo, amagagasi aphakeme kakhulu e-ultrasonic enza ama-bubbles amancane okugcoba noma aphuma emanzini. Lapho ama-bubbles athola umthamo lapho bengasakwazi ukuwuthola khona amandla, awela phansi ngesihluku ngesikhathi somjikelezo ophezulu wokucindezela. Lokhu kwenzeka kuthiwa yi-cavitation.
I-implosion ye-bubble cavitation iholela ezincane-turbulences kanye ne-micro-jets ezifika ku-1000km / hr. Izinhlayiya ezinkulu zincike ekukhuphukeni kwamanzi (nge-cavitation ewela emoyeni ozungezile) noma ukunciphisa usayizi wezinhlayiyana (ngenxa ye-fission ngokusebenzisa ukushayisana kwe-inter-particle noma ukuwa kwe-bubble cavitation eyenziwe phezulu). Lokhu kuholela ekusheshiseni okusheshayo kokusabalalisa, izinqubo zokudluliswa kwamandla kanye nokusebenza kwesigaba esiqinile ngenxa yobukhulu bekristall kanye nesakhiwo sokushintsha.
amaprosesa ase-ultrasonic bese ugeleza amaseli Ukuhlakazeka futhi ukutholakala kwamanzi ama-powders kuyatholakala I-Laboratory futhi ukukhiqizwa izinga. Izinhlelo zezimboni zingasetshenziswa kabusha kalula ukuze zisebenze ngokuqondile. Ukucwaninga nokuhlolwa kwalolu hlelo kanye nabaningi izinqubo ze-sonochemical sincoma amadivayisi wethu we-laboratory noma I-UIP1000hd.
(ngaphambili) AL (OH)3 (ngemuva)